Kulankii Madasha Wadatashiga Qaran oo Galay Maalintii Afaraad iyo Qodobbo weli la isku hayo |
Kulankii Madasha Wadatashiga Qaran oo Galay Maalintii Afaraad iyo Qodobbo weli la isku hayo
Muqdisho (NN) 01/06/2016
Shirka Madasha Wadatashiga Qaran ayaa galay maalintii afaraad, waxaaana shirkan lagu waday in lagu soo gaba-gabeeyo saddex casho, balse dib u dhac ayaa ku yimid, kaddib markii la sheegay inay jiraan qodobbo weli la isku hayo.
Hoggaamiyeyaasha Soomaalida ee Kulankan ka qaybgalaya ayaa wali isku mari la’ qaabka Muqdisho ay xubno uga yeelanayso Aqalka sare iyo Habka loo Maareynayo, iyadoo Madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay ku doodayaan in kuraasta aqalka sare ee Muqdisho lagu saleeyo 4.5.
Sidoo kale, Waxaa aad looga doodayaa Qaabka loo soo xulayo Xildhibaanada soo socda iyo tirada Maamul walba helayo ama ka imaanayo Maamul-goboleedyada, iyadoo maamul kasta uu doonayaa inuu ka sad-badsato maamulada kale.
Kulankan ayaa lagu waday in la soo gabagabeeyo shalay galinkii dambe, laakiin ma dhicin oo ilaa iyo xalay madaxda dowladda Somalia iyo kuwa maamullada ka jira dalka waxay Muqdisho ku lahaayeen kulamo gaar gaar ah.
Ugu dambeyn, Shacabka Muqdisho ayaad aad u sugaya arrinta Matalaadda Aqalka sare oo horay looga qadiyay, hase ahaatee haatan madaxda isla garteen, balse wali aan lagu heshiin tirada iyo sida loo qeybsanayo